I-Isotretinoin powder (Raxx-4759-48) i-hplc =2% | AASraw
/ iimveliso / abanye / Isotretinoin powder
SKU: 4759-48-2. Udidi: abanye
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-order ye-Isotretinoin powder (i-4759-48-2), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Isotretinoin, eyaziwa nangokuthi i-13-cis-retinoic acid, yipilisi esetyenziswa ngokuyinhloko ekuphatheni i-acne enzima. Ngokuqhelekileyo, isetyenziselwa ukunqanda umdlavuza othile wesikhumba (squamous-cell carcinoma), kunye nokunyangwa kwamanye amagciwane. Isetyenziselwa ukuphatha i-harchquin-type ichthyosis, isifo esiqhekeza isikhumba, kunye ne-lamellar ichthyosis. Isomerom yayo, i-tretinoin, ibuye i-acne drug.
Isotretinoin powder ividiyo
I-Isotretinoin ebomvu iifowuni ezisisiseko
I-molecular Formula: C20H28O2
Isisindo somzimba: 300.44
umbala: I powderstalline powder
Amagama amaRaw Isotretinoin
I-Isotretinoin ikwabizwa ngokuba ngu-Absorica, i-Accutane, i-Amnesteem, i-Isotretinoin (i-CAS 4759-48-2), uClaravis, uSotret.
Ukusetyenziswa kwePowder e-Isotretinoin
Kubantu be-noamal, i-Isotretinoin ifanele isetyenziswe ngomlomo kwi-0.25-0.5mg ixesha, kabini ngosuku.Kuninzi i-2mg ngosuku, ayikho ngaphezu kweeyure ze-20.
Isilumkiso kwi-Isotretinoin powder
 unobungozi kwiphina isithako kwi-isotretinoin okanye kwi-vitamin A
 ukhulelwe, unokukhulelwa, okanye ukuba uceba ukukhulelwa
Kwaye umphumo omncinane wecala uquka: Imilebe yomlomo kunye nomlomo, ukuvuvukala okuncane kweentloko zeentloko okanye imilomo, isikhumba esiqhekezayo, i-nosebleeds, isisu esicasulayo, okanye ukunqunyulwa kweenwele kunokwenzeka.
I-Isotretinoin isetyenziselwa ngokuyinhloko i-cystic acne kunye ne-acne engaphendulanga kwezinye iindlela zokwelapha.Abaninzi bama-dermatologists bancedisa ukusetyenziswa kwonyango lwe-degrees elincinci ye-acne ebonisa ukunganyanga kwezinye iyeza, okanye ezivelisa ukonakala komzimba okanye kwengqondo.
Kwakhona kuyasebenza nakwi-hidradenitis suppurativa kunye nezinye iimeko ze-rosacea ezinzima. Ingasetyenziselwa ukunceda ukuphatha i-harlequin ichthyosis, i-lamellar ichthyosis kwaye isetyenziswe kwiimeko ze-xeroderma pigmentosum ukukhupha i-keratoses. I-Isotretinoinhas isetyenziselwe ukunyanga imeko ebunqabileyo kakhulu i-fibrodysplasia ossificans progressiva. Kwakhona kusetyenziswa unyango lwe-neuroblastoma, uhlobo lwesifo somhlaza.
I-Isotretinoin yonyango iphinde iqinisekiswe ngokusebenzayo malunga neentlobo zamagqabini ezisemzimbeni ekusebenziseni ukulinganisa, kodwa ayiqhelekanga isetyenziswe kulo mboniso njengokuba kukho unyango olungakumbi. I-Isotretinoin ingabonisa indlela efanelekileyo yokukhusela i-recalcitrant condylomata acuminata (RCA) yomlomo wesibeleko. Kwamazwe amaninzi le ngonyango ayilunganga kwaye isetyenziswe kuphela ukuba ezinye iindlela zokwelapha zahluleka.
I-Raw Isotretinoin yokuthengisa
Indlela yokuthenga i-Isotretinoin powder (i-CAS 4759-48-2) esuka kwi-AASraw
I-AASraw inikezela ubumsulwa 99% Isotretinoin powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iilabhu zangaphantsi zokusetyenziswa komlomo.